ကြက်ကောက်ညှင်းအစားသွပ် | Wutyee Food House
« ပြောင်းဖူး ကော်ရည်ဟင်းချို
ကြက်သား နှင့် ကြက်အူချောင်း ပီဇာ »
January 2, 2010 by chowutyee
၂။ ကောက်ညှင်းဆန် – ၃လုံး (ရေဖြင့်ဆေးပေးပါ)
၃။ မှို – ၁၅ ကျပ်သား (၄စိပ်စိပ်ပေးပါ)
၄။ ပုဇွန်ခြောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
၅။ ကြက်အသဲအမြစ် – ၃စုံ (အတုံးသေးများတုံးပါ) (ထည့်ချက်ချင်ကထည့်နိုင်ပါသည်)
၆။ ပဲငံပြာရည် အနောက်
၇။ ကြက်သွန်နီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်း)
၈။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်း)
၉။ ဂျင်း – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က် (နှုတ်နှုတ်ဆင်း)
၁။ ကြက်တစ်ကောင်လုံး အတွင်း၊အပြင်ကို ပဲငံပြာရည်အနောက် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ဖြင့်နုယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် အနည်းဆုံး ၂နာရီခန့် နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် စတီခွက်ကြီးထဲ ကြက်တစ်ကောင်လုံးထည့် ပေါင်းအိုးဖြင့် မိနစ် ၃၀ခန့်ပေါင်းပေးပါ။
၁၁။ ရေအနည်းငယ်ခန်းသွားလျှင် အဖုံးဖွင့်ပြီး မကပ်အောင် မွှေပေးပါ။
၁၄။ ပေါင်းပြီးလျှင် ကောက်ညှင်းများကို ပန်းကန်ပြားထဲမှောက်ထည့်ပါ။ အပေါ်မှ ကြက်ကောင်လုံးကို အတုံးကြီးများတုံးပြီး တင်ပါ။
၁၅။ ပြီးလျှင် ဒယ်အသေးထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်း) ထည့်ပြီး ဂျင်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၂ဇွန်း) ဆီပူထိုးပါ။
၁၆။ ကြက်ပေါင်းရည်ထည့်၊ ပူလာလျှင် ဖျော်ထားသော ကော်ရည်အနည်းငယ်ကို ထည့်မွှေပေးပါ။
၁၀။ ထိုကော်ရည်ကို ကြက်ကောင်လုံး ပေါ်သို့လောင်းချပေးပါ။
၁၈။ အသင့်စားနိုင်သော ကြက်ကောက်ညှင်းအစားသွပ် ရရှိပါသည်။
၁။ ဒီကြက်ကောက်ညှင်း အစားသွပ်ဟင်းကို ၀တ်ရည် နှစ်သစ်ကူးနေ့က လုပ်စားဖြစ်တာပါ။ ဒီကြက်ကောက်ညှင်း အစားသွပ်ဟင်း အရသာဟာ ကောက်ညှင်းမှာရော၊ ကြက်သားမှာရော အရသာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများမှာသာ မှာယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ |5Comments
on January 2, 2010 at 3:58 am | Reply myintkt
on January 3, 2010 at 12:23 pm | Reply hmone gyi
wow look delicious…i miss that chicken with sticky rice
on May 4, 2010 at 4:29 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားပါ့လား၊ သူငယ်ချင်းတွေ စုံ၇င် 🙂
on July 7, 2011 at 2:52 pm | Reply Aye Aye
Is it possible to roast in in ovan instead of fry and steam the whole chicken? Because my hubby don’t like oily food. Thanks.
on November 8, 2011 at 10:04 pm | Reply ကြက်သား ကောက်ညှင်းပေါင်း « Wutyee Food House
[…] ကြက်ကောက်ညှင်းအစားသွပ် […]